‘प्रधानमन्त्रीमा मृगौलासम्बन्धी एन्टीबडी बढी देखियो’ (भिडियोमा) - Kendrabindu Nepal Online News
‘प्रधानमन्त्रीमा मृगौलासम्बन्धी एन्टीबडी बढी देखियो’ (भिडियोमा)
५ भाद्र २०७६, बिहीबार १९:१८
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सिंगापुर प्रस्थान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली विहिबार अपरान्ह साढे १ बजे थाई एयरको उडान नम्बर GT 320 बाट सिंगापुर प्रस्थान गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग उनकी श्रीमती राधा शाक्य, सहयोगी, निजी चिकित्सक र सुरक्षाकर्मी पनि सिंगापुर प्रस्थान गरेका हुन् । केही समय अघि उपचार गराएर स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री ओली फेरी थप उपचारका लागि सिंगापुर गएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीका निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंहले एक विज्ञप्ती जारी गरेर अघिल्लो पटकको स्वास्थ्य परीक्षणमा प्रधानमन्त्री ओलीको शरीरमा मृगौलासम्बन्धी एण्टीबडीको मात्रा केही बढी देखिएको जनाएका छन् ।
“एण्टीबडीलाई शरीरबाट निस्कासन गरी निराकरण गर्ने उपचार बिधिलाई निरन्तरता दिन उहाँ फेरि त्यसतर्फ जान लाग्नुभएको हो” डा. सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
Prevदाम्पत्य जीवनमा किन खटपट आउँछ ?
भूकम्पिय इतिहासको कालोदिन : आजै गएको थियो ०४५ सालको विनासकारी भुकम्प (५ भदौ ०४५)Next